Madaxweyne Shariif oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay Muqdisho (Daawo sawirada)
(Mogadishu, Somalia, Aug, 05, 2012) Madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Shariif Sh Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, ayadoo si heer sare ah ay u soo dhaweeyeen masuuliyiin ka tirsan dowladda iyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho.
Kummanaan dadweyne ah ayaa isugu soo baxay waddada Maka Al-Mukarama, kuwaas oo sitay Sawirka madaxweynaha, boorar waaweyn iyo dhar lagu sawiray muuqaalka iyo magaca madaxweynaha. Sidoo kale boqollaal dadweyne ah oo intoo kale sita ayuu madaxweynuhu ku gacan qaaday garoonka diyaaradaha ee Adde Cadde. Shir jaraa’id oo uu ku qabtay Garoonka diyaaradaha ayuu madaxweynuhu uga warbixiyay kulankii uu la yeeshay xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Hellery Clinton. Wuxuuna sheegay in mareykanku ay Soomaailya ugu hambalyeeyay horumarka ay ka sameysay dhinacyada siyaasadda, Ammaanka iyo bani’aadamnimada.
Mogadishu, Somalia Maxamuud Axmed Xasan